Mpanamboatra fatoriana tsara indrindra sy orinasa | Media
Ny Farafaran'ny Seoul
Fandriana tsy misy fangarony Seoul Avy any an-daniny, ny sisin'ny farafara dia toy ny andilan'ny vehivavy tsara tarehy. Eo aloha dia mahaleo tena ireo backrests roa ary tsy misy akony amin'ny fampiasan'izy ireo. Toy ny sary hoso-doko menaka ny farafara fandriana ampiarahina amin'ny loko miloko amin'ny loha-loha. Avo kokoa ny elatr'i Seoul. Amin'ny fotoana fialamboly dia afaka mipetraka eo am-pandriana isika hamaky na hiresaka. Misy ondana lehibe eo am-pandriana. Mety amin'ny fanitsiana izany.
Fandriana amin'ny efitrano fatoriana maoderina
Seza tokana 800x860x780mm
Fitaovana ivelany: Lamba landihazo + hoditra manokana
Frame: Farafara vita amin'ny vy
Fiorenana am-pandriana sy fiatoana: Aforitra fandriana (fefy vy sy kofehy hazo mafy)
Farafara fandriana: Famenoana landihazo zazakely
Tongotra fandriana: Tongotra vy
Ny sisin'ny haingon-trano amin'ny fonony dia tafiditra ao anaty lamba volondavenona mainty, manampy fahatsapana tsipika ary mampiseho fihetsika mahafinaritra. Ny ondana feno savony feno hakitroka dia manohana ny lohantsika sy ny sorontsika. Toa milay izany, izay manana fifandraisana manan-danja amin'ny ampahan'ny mpamolavola ny famolavolana vokatra.
Ny sofa sofa dia famolavolana minimalist izay miavaka amin'ny sandry sandry izay namboarina araka ny Ergonomics.
Ny Frame Steel Carton
Tabilao vita amin'ny baoritra avo lenta.
Famolavolana maoderina, ahazoana aina, mahazatra, kanto.
Mamorona fahatsapana mipetraka ao anaty rahona.
Ny fandriana feno dia feno tsara ho an'ny efitrano. Ny sponjy avo lenta dia mampihena ny fahasimbana.
Ny landihazo malefaka dia toy ny hoditry ny zaza.
Ny fototra fandriana
Fiorenan'ny fandriana, Confort, Grand Big
Ao anaty cushion lehibe dia mameno spaonjy, malefaka ary confortable tokoa!
Ao amin'ny firafitry ny hazo kesika dia mifono volom-borona polyurethane miovaova be-résilience. backrests amin'ny trondro misy hateviny isan-karazany, voaravaka volomboasary polyurethane miovaova-mihetsiketsika avo lenta, quilting ho an'ny malefaka.
Ny fandriana fandriana
Sarin'ny fandriana matanjaka
Vy vy + kofehy hazo matevina; Famoronana endrika. Mitahiry habaka bebe kokoa, fikirakirana mety, fanaparitahana tsotra, fitehirizana mety.
Ny toe-tsainay mifantoka amin'ny mpanjifa dia miantoka fa ny maodelinay ao anaty tahiry sy ny fandriana fanaonay dia mahazo aina sy mateza kokoa noho ny fanaka mifaninana. Miaraka amin'ny fifehezana ny fandaniam-bola faran'izay avo lenta sy ny famokarana an-tsarimihetsika dia miakatra ambonin'ny mpanamboatra fandriana hafa izahay amin'ny vidiny ambany sy kalitao avo lenta.
Namboarina ho an'ny haben'ny mpanjaka
MEDO manome mpanjifa amam-pandriana azo refesina ho an'ny mpanjifa hamaly ny filan'ny tsena samihafa. Afa-tsy ny habeny, manolotra tahiry ho an'ny famolavolana izay teknika azo atao safidy safidy koa izahay.
Miaraka amin'ny paikadinay ho tonga mpamatsy fanaka an-trano tokana, ny fahafahanay sy ny fahafahanay amin'ny famolavolana sy famokarana fandriana dia mitombo isan-taona.
Ny ekipa efa za-draharaha sy ny mpiasa dia miantoka ny vokatra MEDO tsirairay avy dia manana kalitao premium hampihenana ny tahan'ny antso aftersales anao.
Farafara fandriana feno habe
Farafara fandriana feno habe feno latabatra azo ovaina ambony. Ny tsipika tsotra dia hita taratra tsara ny votoatin'ny hevitra famolavolana minimalista. Ny takelaka dia feno ondana 2 lehibe izay manome lanja fanampiny.
Tsy ny mpanjifanao rehetra no manana efitrano fandriana lehibe, mila fandriana lehibe ho an'ny mpanjakavavy ianao handraisana izany ampahan'ny tsena izany.
MEDO dia manome fandriana amin'ny haben'ny mpanjakavavy manavotra toerana izay mety tsara amin'ny toerana kely. Izy io dia manana endrika farany miaraka amina tontonana manify sy matanjaka ary eo amin'ny takelaka mba hiantohana ny filan'ny fiarovana sy ny toerana.
Manolotra safidy maro isan-karazany amin'ny fandrakofana fitaovana, ianao dia ho afaka hanome fahafaham-po ny safidinao amin'ny loko sy ny firafitry ny lamba sy ny hoditra.
Manana ny CERTIFICATE DE DESIGN PATENT anay izahay, raha misy ny maka tahaka dia azontsika atao ny mamantatra ny andraikitra.
Seza tokana / Ottoman 800x860x780mm / 500x380x380mm
Fitaovana ivelany: Hoditra microfiber
Frame: Kitay hazo lavenona
Fiorenana am-pandriana sy fiatoana: Volon'ondry voajanahary / zorony mandry (zorony vy sy kofehy hazo mafy)
Tongotra fandriana: Tongotra hazo matevina
Fitaovana ivelany: Lamba Eco
Fiorenana am-pandriana sy fiatoana: Volom-borona voajanahary
Farafara fandriana: Aforitra fandriana (fefy vy sy kofehy hazo mafy)
Tongotra fandriana: Tongotra vy vy
Fitaovana ivelany: Lamba landihazo sy rongony
Frame: Farafara vita amin'ny vy tsy misy fangaronam-bolo
Tongotra fandriana: Tongotra vy tsy misy fangarony
Teo aloha: Rafitra mihetsiketsika azo ovaina